FICUS "ABAABUL": SAWIR, DARYEEL GURI, KU-TALLAALID - SOOSAARKA DALAGGA
Warshad sida liana - ficus u eg
Hadda dadka deggan magaalooyinka waawayn inta badan ma laha xidhiidh lala yeesho dabeecadda.
Sababta tan, oo ay ku jirto waqtiga la'aanta.
Qof ayaa sidoo kale jeclaan lahaa in uu helo wax sidan oo kale ah, haa ma jirto waayo-aragnimo ah inuu baxo.
Ficus "Abuur", isagu waa cirif xaq ah oo xaq ah, daryeel isaga uma baahna waayo-aragnimo badan iyo saameyntu waxay noqon doontaa mid cajiib ah, waxaa looga hadli doonaa.
Abuuritaanka Ficus - Ficus Sagittata, oo loo yaqaan 'Dwarf Ficus - Ficus pumila.
Qoyska: Mulberry - Moraceae.
Waddanka: Gobollada qoyan ee Shiinaha iyo Japan.
Noocan ficus ah ayaa noqday mid caan ah sababtoo ah sifooyinka caleemaha jilicsan, taasoo si deg deg ah u socota isla markaasna waxay leedahay xididooyin dheeraad ah oo badan.
Caleenta ficuska ah ee taabashada waa qallafsan, lulaaban, oo ku rinjirta midab cagaaran, leh qaab qaab wadnaha ah iyo qaab muuqaal ah dusha sare.
Caawimaad: Dhinaca hoose ee stem waxaa jira suckers gaar ah, oo leh caawimaad taas oo ficus ku dhajin karo ilaa ku dhowaad kasta oo ku haboon.
Sida lianas, dhirta waxay faafin kartaa xididkeeda xitaa qashinka ugu darajeysan ee jirka ee deriska deriska ah, oo u koraya qiyaasta ballaaran, hal shakhsi ayaa dabooli kara dhowr mitir oo laba jibbaaran.
Isbedelka da 'yarta waa muuqaal ka mid ah noocyada noocan ah: yaryar, dheer oo celcelis ahaan 2.3 cm iyo ballaadhan 1,5 cm ka baxa salka caleemaha waa asymmetrical waxayna leeyihiin qaab muuqaal leh, waxay noqonayaan kuwo muuqda oo weyn, gaaraya 10-11 cm oo dherer ah, isla markaana waxay noqdaan kuwo aan si sahlan loo haynin, iyagoo xajistay qaabkooda hore ee leh xuubka yar ee xididdada yaryar ee ka soo jeeda dhinaca hoose.
Noocyadaasi waxay leeyihiin hal dhibaato.
Caawimaad: Noocyadaasi waxay muujinaysaa shuruudo korodh ah xaaladaha qoyaanka. In dhaqanka beeritaanka loo adeegsaday tan iyo 1721
Ficus kale oo cufan caan ah waa Pumila White Sunny, xiiso leh quruxdiisa. Wakiilada ugu caansan ee ficuusyada waxaa ka mid ah De Gantel, Lirat, Moclame, Bengal, Mikrokarp, Balsamine, Karik, Cagaar weyn iyo caleen yar.
Daryeelka ficus waa mid sahlan, xitaa bilawga bilawga ah ayaa la qabsan kara, waxaad u baahan tahay inaad sameyso walxo gaar ah si aad u bacrimiso ciidda, waa inaad bilowdaa bartamihii guga iyo sii wadaa ilaa dhammaadka xilli-xagaaga.
Sida caadiga ah, waxaa loo isticmaalaa labadii usbuucba hal mar, mararka qaarkood dharka sare, laakiin halkan waa in lagu dhaqmaa, tan iyo marka la hirgelinayo xaddi badan oo bacrimin ah, dhirta waxay bilaabi kartaa in ay lumiso caleenta.
Haddii ficus uu ku koraayo faleebo dabiici ah, ka dibna Bacriminta potash kaliya waa in la dabaqaa. (KO, KNO3 ama KSO4), dhammaan dhirta lagama maarmaanka ah waxay qaadan doontaa lafteeda.
Bacriminta Complex waa in aan loo isticmaalin, waxaa lagu dhaqi doonaa biyo ku ah aquarium, iyo tani waxay keeni doontaa kor u kaca, iyo la'aanta potassium joogayaa.
Haddii, tusaale ahaan, marka la bilaabayo ficus uu muujin doono calaamadaha gaajada, ka dibna waxaa ugu wanaagsan in la burburiyo Bacriminta nafaqeeyayaalka yar yar ee dareeraha iyo faleebo 6-8 dhibcood si toos ah hoosta xididka.
Marka la sameynayo qaliinkan, sheyga ayaa la damiyaa ilaa nus maalin, iyo potassium weli waa loo baahan yahay in la siiyo warshadda oo leh tiro isku mid ah.
Xilliga qaboobaha, ficuska cambaarta waxaa ugu wanaagsan in lagu hayo xaalado qumman oo qumman.
Awood u leh inuu ku noolaado heerkulka laga bilaabo -10 ilaa +25 ° C Laakiin tani waa ilaa xad xad dhaaf ah. Si loo gaaro guusha waxaa lagama maarmaan ah in la ilaaliyo nidaam heerkulka dhexdhexaadka ah.
Si xayawaankaagu u kobciyo oo u noqdo mid caafimaad qaba, waa inaad doorataa meel aad u iftiimiso, ka fogaanshaha soo noqoshada iftiinka qoraxda, qoyan iyo diirran.
Heerkulka sarreeya, ficus wuxuu u baahan yahay buufin joogto ah biyo diirran - ficus cuurku uma dulqaadanayo hawada qalalan.
Xaaladaha caadiga ah, habka lagu waraabiyo xayawaankaaga ayaa gaar ahaan muhiim ah inta lagu jiro dhismaha caleemaha, waqtigan dhimashada ficus yar oo ka timaadda la'aanta qoyaanka ayaa ugu badan.
Waa mid aad u muhiim ah in la tixgeliyo marka la beerto dheriga, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo boogaha gaarka ah si ay u taageeraan caleemaha dhalinyarada.
Qaar badan oo qoyaan ma dhaawici karaan geedka, laakiin waxay u fiicnaan laheyd inay ku dhejiyaan meel taagan oo biyo ah.
Dhammaan waxa loo baahan yahay waa geedka laftiisa, laakiin kharashka ayaa sii ahaan doona. Haddii aad rabto in aad hesho caleemo caleen wanaagsan, ka dibna waxaa lagama maarmaan ah in lagu sameeyo buufinta joogto ah ee ficus.
Digniin! Haddii biyaha gurigaaga ku yaala uu leeyahay heer aad u sarreeya oo adag, waa in lagu difaacaa ama la mariyaa shaandhad.
Haddii ay jirto baahi loo qabo bedelka ficus ee xaaladaha qolka, waxaa lagula talinayaa inay sameeyaan guga, marka xididdada dheriga noqdaan meel yar.
Si arrintan loo sameeyo, waa inaad horey u haysatid: ciid, cows iyo caleen cufan, ciidda humus oo eegaya tirada soo socota 0,5:1:1:1.
Haddii aan ka hadleyno filterka phyto, ka dibna ciid fudud fudud ayaa loo isticmaalaa, geedka u baahan yahay oo kaliya dhuuban ciidda.
Warshadu waxay kicisaa guga, adoo raacaya.
Wixii caleemaha dhalinyarada, waxay noqon doontaa mid waxtar leh in ay sameeyaan wax sida geedka aqalka dhirta, si loo abuuro nidaam heerkulka jilicsan, by si joogto ah ku buufin, mustaqbalka dhirta si tartiib tartiib loogu habeeyey si ay hawada qolka firirka.
Taajka ficus, sida dhirta kale, waxaa loo sameeyay laba siyaabood: gooyo ama qanjaruufo.
Caawimaad: Gooyaa waa geedi socodka lagaga saarayo geedka leh dhowr caleemo.
Xididdu waa ka saarista buro sare ee biqil, kaliya ka sarreeya xaashida sare.
Fikradda sawirka "Abaabul":
Ma rabtaa in aad xitaa raaxo aad u hesho gurigaaga? Noocyada soo socda ee ficus ayaa kaa caawin kara arintan: Ampelny, King Amstel, Blunted, Retuz, Benedict, Ginseng, Ali, Triangular iyo Eden. Dhammaan waxyaalaha qarsoodiga ah ee beerahooda waxaa laga heli karaa maqaalada boggayaga.
Inta badan, warshadani waxay ka jirtaa weerarrada caarada caarada, boodhadhka iyo shchitovki waxay sidoo kale waxyeelo u geystaan ​​ficuskaaga xilliga nugul.
Hababka la macaamilayo dulinadani waa isku mid sida phytonia: daaweynta fitoderm, derris, aktellik iyo fufanom, walxahan waxaa inta badan loo isticmaalaa dagaalka ka dhanka ah cayayaanka.
Haddii caleenta ay bilaabantey inuu baxo oo uu huruud noqdo - tani waa calaamad muujinaysa in geedku uu jiran karo, ama uu yahay mid xun. Sababta tani waxay noqon kartaa dhowr.
Waa muhiim! Si taxadar leh u fiiri meesha ay tahay ficuskaaga. Haddii ay ku taallo gees jilicsan, nidaamka kuleylka, ama, liddi ku ah, qabyaal furan, ama si toos ah qorraxda.
Waa mid deg deg ah in la raadiyo meel kale oo ku habboon.
Way ka fiican tahay in laga saaro dabka iyo in hawada qoyan ugu yaraan hal mar maalintii. Fikus kale waa mid aad u "cabsi leh" qabyo ah.
Intaa waxaa dheer, la'aanta qoyaan iyo heerkulka sare ee qolka wuxuu kaloo soo jiidan karaa caarada caarada iyo xajmiga.
Sidee loo go'aamiyaa waqtiga dhabta ah ee xanuunkaani ku dhacay ficuskaaga? Haddii caleemaha ay ku dhacaan dhibco mugdi ah, ayaa lumay midabkooda oo ay hoos u dhacaan, tani waa calaamad saxan ee miisaanka.
Cayayaanka Kuwani waxay ku fekerayaan geedka oo dhan waxayna ku quudiyaan casiirkooda.
Si looga takhaluso karbaashkan, waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo xalinta saabuunta daciifka ah macno ahaanna ku maydho gaashanka suufka qoyan ee qoyaanka loo diyaariyey.
Haddii dhirtu leedahay meel baaxad weyn, ka dibna waxay ka caawineysaa inuu jilaha ka caawiyo 15-20 dhibcood ilaa 1 litir oo biyo ah.
Haddii dhammaan sharciyadan la raaco, ficus "Abuur", waa curyaan, waxay kugu farxi doontaa oo qurxin doontaa gurigaaga wakhti dheer, adigoo ah shey dabiici ah, taas oo hadda aan wax ka hayno magaalooyinka.